Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Uru nke ịhọrọ usoro akwụkwọ ịkpọ oku akpaghị aka
N'ime ụwa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ dịla mkpa karịa mgbe ọ bụla ịnwe usoro akwụkwọ ịkpọ oku akpọrọ akpọrọ.
Kedu uru nke sistemụ akpaaka akpaaka gị?
Nke mbu, ịgaghị agọnarị na akpaaka ga -azọpụta gị ọtụtụ oge, ihe bara uru nye onye ọchụnta ego ọ bụla.
Ọ na -ewepụ ihe kpatara mmadụ site na nhazi nke na -ebute ohere maka njehie.
N'agbanyeghị afọ ole ụlọ akwụkwọ ị ga -achọ ka obere azụmahịa gị bụrụ, enwere ụfọdụ ihe kacha mma n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ha na -akpaghị aka, na akwụkwọ ịkpọ oku ga -abụ otu n'ime ha.
Na -akpaghị aka usoro akwụkwọ ịkpọ oku amarala na ịbelata njehie na ọnụ ahịa ọrụ site na 50%, nke ahụ bụ nnukwu ego ị na -ekwesịghị ịbụ ihe ịma aka.
Ọ bụrụ na ịmabeghị nke ọma onye nrụpụta akwụkwọ na ka ha ga -esi baara uru maka azụmahịa ọ bụla mana ọkachasị obere azụmahịa, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị.
N'isiokwu a, anyị ga -atụle ihe kpatara ị ga -eji họrọ sistemụ ịnata ego na -akpaghị aka karịa akwụkwọ ntuziaka, yana ụzọ niile ọ ga -esi baa uru ma nwee ezi uche maka azụmahịa gị.
Ọ na -azọpụta ọtụtụ oge
Enweghị agọnarị na ị ga -azọpụta ọtụtụ oge mgbe ị gbanwere na ngwanrọ akwụkwọ ọnụahịa akpaaka. N'ime ụwa azụmaahịa oge echekwara dịkwa ego echekwara, na ị kwesịrị ịgbalị ime mkpebi ndị ga -eme ka nke a mee.
Ọ bụrụ na ị ghọtaghị otu ngwanrọ invoicing na -akpaghị aka ga -azọpụta gị ego, mgbe ahụ anyị ga -akọwa nke a n'ụzọ dị mfe. Mgbe ndị otu gị anaghị etinye oge na mbọ dị ukwuu n'ịdebe akwụkwọ ọnụahịa, nke ahụ na -ebute ọnụ ahịa ọrụ. Ma ọ bụ ha nwere ike itinye uche ha n'ihe ndị ka mkpa ga -enyere azụmahịa gị aka n'ụzọ ndị ọzọ. N'ikpeazụ, nke a ga -enwekwa mmetụta dị mma na akara ala gị.
Ikekwe, otu n'ime isi ihe kpatara ịgbanye na sistemụ akpaaka bụ ịchekwa oge yana nke a metụtakwara akwụkwọ ọnụahịa.
Belatara ohere nke njehie
Ọ bụ ihe dịịrị mmadụ imehie ihe na mperi, mana mgbe ụfọdụ obere mmejọ nwere ike mebie ọnụ ahịa azụmaahịa nke ukwuu, n'ihe gbasara oge na ego.
Site na ngwa nro dị ka Billdu, ị nwere ike belata ohere nke njehie nke ukwuu ma nweekwa usoro ahaziri nke ọma ịchekwa mmefu gị niile yana ego ị na -akpata.
Nke a bụkwa nnukwu uwe siri ike dị otú ahụ n'ihi na ha na -enye gị ohere ijikwa ihe niile na -arụ ọrụ n'otu ikpo okwu.
Dịka obere azụmaahịa, nke a bụ n'ezie ihe ị ga -erite uru na -emegide inwe ọtụtụ nyiwe maka ihe dị iche iche.
Ịnweta atụmatụ mkpesa
Na a akwụkwọ ntuziaka akwụkwọ ntuziaka, ị ga -agabiga ọtụtụ nsogbu iji mee akụkọ iji gosi ndị ọzọ metụtara azụmahịa gị, ma ọ bụ ọbụlagodi na ịchọrọ ịhụ n'onwe gị.
Softwares ndị na-akwụ ụgwọ ga-enwe atụmatụ mkpesa nke ga-enyere gị aka iwepụta akụkọ mara mma nke na-akọwa ọrụ azụmahịa gị n'ime sekọnd ole na ole. Nke a ga -enye gị nkọwa zuru oke nke arụmọrụ azụmaahịa yana nyekwa gị ohere ịme pl ọ bụla n'ọdịnihu